Kolonyo Katirsan Ciidamada AMISOM oo qaraxyo lagula beegsaday Xaafadda SOS.
Thursday July 25, 2019 - 19:12:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Qaraxyo is xigxigay oo khasaara lagu gaarsiiyay ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa maanta gelinkii dambe ka dhacay gudaha magalada Muqdisho.
Dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in laba qarax lala helay koloyo kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada AMISOM xilli ay ku socdaalayeen xaafadda SOS ee degmada Hiliwaa gaar ahaan halka loo yaqaan S. Company.
Qaraxa koowaad ayaa si gaar ah loola beegsaday gaari Taw ah khaas ahaan kuwa saraakiisha lagu qaado , wararku waxay sheegayaan in qaraxu uu burbur xooggan gaarsiiyay gaariga waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday saraakiishii la socotay.
Daqiiqado kadib markii uu qaraxa koowaad dhacay waxaa xigay qarax kale oo lala helay isla kolonyada ciidamada shisheeye, wararka ayaa intaas ku daraya in muddo saacada ah ay ciidamada laqarxiyay ku sugnaayeen halkii lagu qarxiyay iyagoo markii dambe jiitay gaarigii laga gubay.